Madaxweynaha Ruushka oo ka qeyb galay arooska wasiirada arrimaha dibada Austria… – Hagaag.com
Madaxweynaha Ruushka oo ka qeyb galay arooska wasiirada arrimaha dibada Austria…
Posted on 19 Agoosto 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ka qeyb galay arooska wasiiradda arrimaha dibedda dalka Austria Karin Kneissl kaas oo ka dhacay maalinimadii shalay magaalada Graz ee dalkaasi Austria.
Putin oo ka mid ahaa boqol marti-sharaf oo arooskaasi lagu casuumay ayaa wacdaro ka dhigay arooska, waxaana uu dhexda qabsaday islamarkaana uu la ciyaaray wasiiradda arooska aheyd kaas oo dad badani u arkeen in ay jiraan wax dheeri ah.
Dalka Austria ayaa lagu tiriyaa in uu u jan-jeero dhanka Ruushka isaga oo ka mid ah daladda Midowga Yurub oo ay wadamadoodu inta badan Ruushku isku kacsan yihiin, waxaana uu dhowr jeer isku dayay wadankaasi in uu u kala dab-qaado Midowga Yurub iyo Ruushka.
Vladimir Putin, oo la jooga arooska iyo aroosada Karin Kneissl iyo ganacsade Wolfgang Meilinger.
Dhowaan markii wadamo badan oo ka tirsan Midowga Yurub ay qaadeen tallaabo ay ku eryeen diblomaasiyiin Ruush ah kadib sumeyntii ka dhacday dalka Ingriiska ayaa waxa Austria ka gaabsatay in ay la safato Midowga Yurub oo uu wadadooda raaco.
Hadalhaynta arooskan ayaanan aheyn mid rabitaan shakhsiyadeed balse waxa uu bannaanka keenay xiriirka dhabta ah ee ka dhexeeya Austria iyo Ruushka.